तपाईंलाई याद छ ? विवाहपछि युवतीमा देखिन्छ यस्तो परिवर्तन « Lokpath
२०७६, १९ श्रावण आईतवार १७:११
तपाईंलाई याद छ ? विवाहपछि युवतीमा देखिन्छ यस्तो परिवर्तन
प्रकाशित मिति : २०७६, १९ श्रावण आईतवार १७:११
काठमाडौं । विवाहपछि युवतीहरु आफ्नो जन्म घर छाडेर पतिका घरमा जान्छन् । उनिले विवाहसँग घर मात्रै परिवर्तन गरेका हुँदैनन् सम्बन्ध पनि परिवर्तन भएका हुन्छन् ।
छोरीबाट बुहारी बनेका हुन्छन् । नयाँ परिवेशमा नयाँ चुनौतीको सामना गर्न परिरहेको हुन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ छोरी या युवतीबाट बुहारी बनेपछि महिलामा के परिवर्तन आउँछ । विवाहपछि महिलाहरुमा हरेक कुरामा परिवतर्न आउँछ । उनीहरुको सोचाइ, बोल्ने, शैली, खानपान रहनसहनदेखि हरेक कुराहरु बदलिंदै जान्छ ।
विवाह भन्दा पहिला घरायसी खर्चमा कुनै वास्ता नराख्ने युवती विवाह गरेर गएपछि भने आर्थिक कारोबारमा सक्रिय बन्न खोज्छन् । विवाह भन्दा पहिला बैंकमा खाता नहुने र खोल्ने आवश्यकता नठान्नेहरुले समेत विवाहपछि बैंकमा खाता खोल्छन् भने घरायसी हिसाबकितामा पनि सक्रियता जनाउँछन् । कसले कति खर्च गरो वा किन गरो, पतिलाई खर्च विवरण माग्ने लगायतका काम गर्छन् ।
७. पहिला जस्तो छैन
हरेक युवतीले विवाहपछि गुनासो गर्छन् । विशेषगरि पतिसमक्ष उनीहरुको गुनासो हुन्छ । तपाई पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न । फेरिनुभयो जस्तो शव्द उनीहरुको नियमित बन्न जान्छ । विवाह पछि पनि व्यक्ति वा पुरुष पहिलाको जस्तै कसरी रहन सक्छ र ? भन्ने चाहिँ उनीहरुले सोच्दैनन् । त्यस्तै पुरुषले पनि युवतीमाथि सोच्ने गर्छ । महिला र पुरुष दुवै स्वतन्त्र भएको बेलाको जस्तो हुँदैनन् । पारिवारिक झमेला, सम्बन्ध र जिम्मेवारीले गर्दा सबै परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दुबै पति र पत्नीले बुझ्ने हो भने समस्या नै पर्दैन । एजेन्सीको सहयोगमा